Hargabka doofaarada iyo cabsida laga qabo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Svininflueansaprognos foto: Stig-Åke Jönsson / SCANPIX
Hargabka doofaarada iyo cabsida laga qabo
La daabacay tisdag 14 juli 2009 kl 15.49
Xilligga deyrta ayaa dad gaaraya 400.000 qof laga cabsi qabaa inuu saameeyo cudurka haragabka doofarada loo yaqaano haddii xitaa la bilaabo in guud ahaan dalkoo dhan laga talaalo dadka cudurkaasi.
Saadasha arrintan ayaa ah mid la xirriirta faafida sida dabacsanaanta leh ee u socda cudurkan. Balse baahidda cudurkan ayaa noqon kara mid aad daran oo gaaraya ku dhawaad dad lugu qiyaasayo shan malyan oo reer Iswidhan ah.
Hey’adaha ka hortaga cudurada faafa iyo xarrunta dhaxe bulshada iyo caafimaadka ee loo yaqaano Smittskyddsinstitutet iyo Socialstyrelsen, taasoo ku saleysan baaritaan ka timid xarrunta dhaxe ee tirokoobka. Marxalada ugu sareysa ee cudurkan ayaa la saadalinaya in saameyntiisa bilaabato dabayaaqada xilliga dayrta.
Ma jirto maanta faafid xowli ah oo cudurkani ku socdo marka laga reebo meelo kamid ah dalkan oo la sheegay in cudurku dad ugu dhacay. Arrintana waxaa ka waramaya Per Follin oo ah dhaqtar kusime ah oo ka howlgala deeganada galbeed dalakan ee la yiraahdo Västra Götlandsregionen.
” Ma ogin qiyaasti inta qof uu soo ritay cudurkan, shalay ayaa ugu dambeysay waxaa la sheegay 160 qof oo saameyey kuwaasoo qaar kamid ah dalka dibadiisa cudurkan kala yimid. Tanina waa tiro yar oo kamid ah dadka uu cudurkani kula dhacay dalka gudihiisa, kuwaasoo xitaa qaarkood xirriir la yeeshay dad dalka dibadiisa ka yimid, laakin ma aragno faafid xoogan oo bulshada dhexdeeda ah la iska qaadsiinayo.”
Dhinaca kale waxaa lugu soo waramaya gabar da’yar oo u dhalatay dalkan Iswidhan in cudurkani ku dhacay iyadoo ku sugan magaalo madaxda Israa’iil ee Talaabiib, halkaaso ay ku jirto koomo oo lagala tacayaala cudurkaasi. Gabdhan ayaa la sheegay iney halkaasi booqasho ku joogay markii ay soo wajahday xaalad caafimaad darro ah oo keentay in ugu dambeyntii qandho xoog leh iyo neefta oo ku ceshoonta loo geliyey koomada. Hooyada dhashay gabashaasi ayaa haragabkan doofrada ku dhacay walow iyadu ay tahay mid aaney sidaasu saameyn.